Delicate က Kenzo ရေမွှေးကြော်ငြာကို copy လုပ်ထားတယ်လို့ စွပ်စွဲခံနေရတဲ့ Taylor Swift
On March 13, 2018 March 13, 2018 By fairy
မနေ့ကပဲထွက်လာတဲ့ Taylor Swift ရဲ့ Delicate music video ဟာ ထွက်ထွက်ပြီးချင်း ၂၄နာရီတောင်မရှိသေးခင်မှာပဲ Kenzo ရေမွှေးကြော်ငြာကို copy လုပ်ထားတာလို့ အဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။
မင်းသမီး Margaret Qualley ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Kenzo World perfumeကြော်ငြာကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်လောက်က released လုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ကြော်ငြာထဲမှာ မင်းသမီးလေးက ဂုဏ်ပကာသနတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ပွဲကိုစိတ်ပျက်ငြီးငွေ့နေပြီး စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်နဲ့ ကခုန်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပြီး Taylor Swift ရဲ့ MTV မှာကတော့ အခမ်းအနားတစ်ခုတက်နေရင်း စိတ်ပျက်ငြီးငွေ့နေရာကနေ သူ့ကိုဘယ်သူမှမမြင်ရတော့တာကြောင့် (ကိုယ်ပျောက်) လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကချင်သလိုကနေတာမျိုးကို ပုံဖော်ထားပါတယ်။
ဝေဖန်သူတွေကတော့ MTV တစ်ပုဒ်လုံး ကျောရိုးတူနေတာတွေ၊ ဟိုတယ် lobby နောက်ခံထားတာတွေနဲ့ ကကွက်တွေတူနေတာကို အဓိကထောက်ပြထားပါတယ်။ ဒီ Delicate MTV ဟာ ခုလောလောဆယ်မှာတေ့ Youtube မှာ #1 trending ဖြစ်နေပြီး ကြည့်ရှုသူ ၁၄မီလျံကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်(၁၃.၃.၂၀၁၈ မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လယ် ၂:၃၀ မိနစ်)။ အချိန်တိုအတွင်းမှာ ဒီလောက်မြန်တဲ့ ကြည့်ရှုနှုန်းကို Taylor Swift ရဲ့ အရင် MTV တွေမှာမရခဲ့ဖူးသေးပါဘူး။ Kenzo ရဲ့ကြော်ငြာကလဲ ကြည့်ရှုနှုန်း ၁၁မီလျံကျော်(မီလျံနီးပါး)နဲ့ လိုက်နေပါတယ်။ (Kenzo အနေနဲ့ ကြည့်နှုန်းတက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ Taytay ကိုကျေးဇူးတင်သင့်တယ်လို့တောင်ထင်မိ ?)
ထုံးစံအတိုင်း twitter ပေါ်မှာတော့ ပလူပျံနေတာပါပဲ။ Taylor Swift က copy ယူထားပါတယ်တို့၊ မယူပါဘူးတို့ ဟိုဖက်သည်ဖက် ငြင်းနေကြတာပေါ့လေ….
ကဲ ယူတို့ရော ဘယ်လိုထင်လဲ??? Delicate နဲ့ Kenzo World ကိုယှဉ်ကြည့်ပြီး copy တယ် မ copy ဘူးဆိုတာကို အဖြေရှာကြည့်လိုက်ကြပါဦးနော်။
(အက်မင့်အမြင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Taylor Swift တစ်ယောက် အကကိုအပြီးတိုင်စွန့်လွှတ်ပြီး အဆိုဖက်ကိုပဲပိုအားစိုက်သင့်တယ်လို့ထင်မိကြောင်းပါ။ အရပ်ကလန်ကလားကြီးနဲ့ တောင့်တောင့်ကြီးကနေတာ မမြင်ရက်လို့ပါ……?)
Image source : Kenzo World
PREVIOUS POST Previous post: ‘Korean National Mint’ မှနေပြီး Exo အဖွဲ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဂုဏ်ပြုဆုတံဆိပ်ကိုထုတ်လုပ်ဖို့ရှိ
NEXT POST Next post: လမ်းခွဲလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Zayn နဲ့ Gigi ???